Nosy malagasy : hidina an-dalambe indray ireo mpanao hetsika fitakiana | NewsMada
Nosy malagasy : hidina an-dalambe indray ireo mpanao hetsika fitakiana
Hidina an-dalambe indray ny Hetsika Madagasikara miaro ireo Nosy malagasy, ny 9 janoary ho avy izao, amin’ny fitakiana ireo Nosy malagasy manodidina, araka ny tapak’izy ireo teny Andravoahangy Ambony, omaly. Fanohizana ny fidinana an-dalambe ny 12 desambra 2015 izany.
Hiainga eny Ambohijatovo ny diabe, hihazo ny araben’ny Fahaleovantena, ary hifarana eo anoloan’ny masoivoho frantsay, Ambatomena, izay iantsoan’izy ireo ny Malagasy hanatevin-daharana ny hetsika.
Ho fanoherana ny fitondrana frantsay amin’ny fibodoany ireo Nosy malagasy ny hetsika, araka ny fanazavan’ny avy amin’ny Hetsika Madagasikara miaro ireo Nosy malagasy, Andriamihaja Solonavalona. “Tsy mbola nanao fihetsehana mivantana eo anatrehan’ny fitondram-panjakana frantsay izahay“, hoy izy.
Fanehoan-kevitra amin’ny dingana farany ny diabe, rehefa tsy misy azo atao eto amin’ny firenena. Fanehoana ny tsy fankasitrahana ny ataon’ny fanjakana izany, fa tokony hanao ny fangatahana ny fanjakana. Mampirisika azy ho amin’izany ny diabe.
Nanao fangatahana fahazoan-dalana amin’ny kaominina sy ny prefetioran’ny Polisy izy ireo. Na azo izany na tsia, tsy hahemotra ny hetsika.
Niala an-daharana Ramaroson Alain
Niala an-daharana amin’ny Hetsika Madagasikara miaro ireo Nosy malagasy Ramaroson Alain. Araka ny fanazavan’Andriamihaja Solonavalona, nisy fifamaliana tao amin’ny fivoriana, folo andro lasa. Nisy ny fanakianana an-dRamaroson Alain fa tsy manaraka teny ierana sy fitsipi-pifehezana izay tsy ilainy izy. Manala tena izy rehefa tsy manaraka izany, araka ny fanazavana azo.
Hanao ahoana ny ho vokatr’izay hoe fidinana an-dalambe izay indray? Tsy hipetra-potsiny amin’izao ny fitondram-panjakana. Toy ny tamin’ny 12 desambra 2015… Miankina amin’izay ny ho faharisihana sy fahamaroan’ny olona, na eo aza ny faharesen-dahatra?